FILE EXPLORER သည် WINDOWS 10 19H1 BUILD 18298 တွင်အသစ်အဆန်းတစ်ခုရရှိသည် - WINDOWS 10
File Explorer သည် Windows 10 19H1 Build 18298 တွင်အသစ်အဆန်းတစ်ခုရရှိသည်
ယနေ့ (တနင်္လာနေ့၊ ၁၀/၁၂/၂၀၁၈) Microsoft အံ့အားသင့်စရာကောင်းလောက်အောင်ဖြန့်ချိခဲ့သည် Windows 10 19H1 Insider preview Build 18298 ကိုကြည့်ပါ File Explorer နှင့် Start menu တိုးတက်မှုများ၊ Notepad updates များနှင့် bug fixes များအပါအ ၀ င်ပြောင်းလဲမှုများစွာကိုပြုလုပ်ပေးသော Fast ring insiders အတွက်။
မာတိကာ ပြ ၁ Windows 10 19H1 Build 18298 ထူးခြားချက်များ ၁.၁ File Explorer အတွက်အိုင်ကွန်အသစ် ၁.၂ ချိန်ညှိချက်များအက်ပ်ကိုပြုပြင်ခြင်း ၁.၃ အုပ်စုများနှင့်ဖိုင်တွဲများကိုလျင်မြန်စွာဖြုတ်ပါ ၁.၄ Touchpad သည် key တစ်ခုစီ၏ hit target ကို dynamically ညှိသည် ၁.၅ Mouse pointer အရွယ်အစားနှင့်အရောင်ကိုပြောင်းပါ ၁.၆ မှတ်ချက်များကို Notepad မှတိုက်ရိုက်ပို့ပေးပါ ၁.၇ Update လုပ်ထားသော Windows 10 Setup အတွေ့အကြုံ နှစ် ဇာတ်ကြောင်းပြောသူအိမ်
အကယ်၍ သင်၏ Device သည် Windows Insider အတွက်ရယူထားပါက Windows 10 Build 18298 ကိုတည်ဆောက်ပြီး install လုပ်ပါအလိုအလျောက်windows update ကနေတစ်ဆင့်သင် update လုပ်နိုင်ပါတယ်အင်အားစုမှ update ကို ချိန်ညှိချက်များ > နောက်ဆုံးပေါ် & လုံခြုံရေး > Windows Update ကို ကိုနှိပ်ပြီး နောက်ဆုံးသတင်းများကိုစစ်ဆေးပါ ခလုတ်။
Windows 10 19H1 Build 18298 ထူးခြားချက်များ
windows Insider blog အရနောက်ဆုံးပေါ် Windows 10 19H1 build 18298 သည် interface ကိုအပြောင်းအလဲအချို့နှင့် Windows ၏အချို့သောဂရပ်ဖစ်အင်္ဂါရပ်များကိုအသုံးဝင်မှုရှိစေရန်တိုးတက်စေသည်။
19H1 ကစပြီး Device မှာ reboot လုပ်ဖို့လိုအပ်တဲ့ update တစ်ခုရှိရင် (mainstream နဲ့ test builds နှစ်ခုလုံးမှာ) Start menu မှာပါဝါခလုတ်ကိုသုံးပြီးအသုံးပြုသူတွေကိုသူတို့ရဲ့ device တွေကို restart လုပ်ဖို့သတိပေးတဲ့လိမ္မော်ရောင်ညွှန်ပြချက်ပါလိမ့်မယ်။
File Explorer အတွက်အိုင်ကွန်အသစ်
ပထမ ဦး ဆုံး Windows 10 preview တည်ဆောက်ခြင်းဖြင့် File Explorer တည်ဆောက်ခြင်းသည် 19H1 ၏အသစ်နှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအလုပ်လုပ်ရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသော (အတွင်းသား၏တုံ့ပြန်ချက်အပေါ် အခြေခံ၍) Icon Explorer အသစ်တစ်ခုရရှိခဲ့သည်။ အလင်းဆောင်ပုဒ် ။
Windows 10 update ပြီးနောက်အလုပ်မလုပ်တဲ့ remote desktop
ဒါ့အပြင် Microsoft ကဒီတည်ဆောက်မှုမှာ sorting options အသစ်တွေကိုမိတ်ဆက်ပေးတယ်၊ အဲဒါကသူတို့ကိုရှာဖွေရတာပိုမိုလွယ်ကူစေရန်ထိပ်ဆုံးမှာဒေါင်းလုပ်လုပ်ထားသောဖိုင်ကိုပြသသည်။
bsod memory_management windows 10
မှတ်စု: သင်၏ Downloads ဖိုင်တွဲကိုမည်သို့မည်ပုံပြုပြင်ပြောင်းလဲမည်ဆိုပါက (View tab) တွင်ပြောင်းလဲမှုမရှိပါ။
ထို့အပြင်နောက်ဆုံးတည်ဆောက်မှုသည် sign-in ရွေးချယ်စရာများအတွက်ပိုမိုရိုးရှင်းသောချဉ်းကပ်မှုကိုပေးရန်အလို့ငှာ Settings app သို့ပြင်ဆင်မှုများကိုပြုလုပ်သည်။ ထို့အပြင်အသုံးပြုသူများသည်ယခုချိန်ညှိချက်များအက်ပ်တွင်လုံခြုံရေးခလုတ်ကိုတိုက်ရိုက်တပ်ဆင်နိုင်သည် အကောင့်များ> ဝင်ရောက်ရန်ရွေးချယ်စရာများ ။
မွတ္စု: လုံခြုံရေးသော့ချက်သည်ဝင်းဒိုးထဲသို့စကားဝှက်ကင်းစွာ ၀ င်ရောက်ခွင့်ပြုရုံသာမကသင်၏ Microsoft အကောင့်ထဲသို့ ၀ င်ရောက်ရန် Microsoft Edge မှလည်းအသုံးပြုနိုင်သည်။
ထို့အပြင် Start menu နှင့် ပါတ်သက်၍ အပြောင်းအလဲအချို့ရှိပါသည်။ ၎င်းသည် unpin context menu command နှင့်အုပ်စုများနှင့်ဖိုလ်ဒါများမှ tiles များကိုဖယ်ရှားနိုင်သည်။
ယခုတွင်သင်သည် Start menu တွင်အရင်ကထည့်ထားသည့်အုပ်စုများနှင့်ဖိုင်တွဲများကိုလျင်မြန်စွာဖြုတ်နိုင်သည်။ ဖိုင်တွဲတစ်ခုသို့မဟုတ်အုပ်စုတစ်ခုကိုချခြင်းဖြင့်၎င်းသည်လွယ်ကူစွာသွားရန် Start menu ၏အဓိကနေရာတွင်ရှိနေသည်။ 'Unpin' ကို right-click လုပ်ခြင်းဖြင့်အသုံးပြုသူများသည် Start menu ကိုပိုမိုလွယ်ကူစွာစုစည်းနိုင်သည်။
Touchpad သည် key တစ်ခုစီ၏ hit target ကို dynamically ညှိသည်
Windows 10 touch keyboard သည်သင်ရိုက်ထည့်လိုက်သောမည်သည့်စာလုံးကိုလာမည့်နောက်မည်သည့်စာရိုက်မည်ကိုခန့်မှန်းခြင်းအပေါ် မူတည်၍ သင်ရိုက်ထည့်လိုက်သောအခါတစ် ဦး ချင်းစီ၏ hit target ကိုပြောင်းလဲနေသောအနေအထားသို့ရောက်နေပါပြီ။ သော့များသည်မျက်လုံးနှင့်မတူပါ၊ သို့သော်အထက်တွင်သင်မြင်သည့်အတိုင်းမှားယွင်းနေသောသော့ကိုသေးငယ်သည့်အနိမ့်အမြင့်ဖြင့်နှိပ်မိစေရန်ယခုချိန်ညှိလိမ့်မည်။
Mouse pointer အရွယ်အစားနှင့်အရောင်ကိုပြောင်းပါ
On cursor & pointer settings page, ယခုတွင်သင်သည် pointer အရောင်ကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်နှင့်အပိုဆောင်းအရွယ်အစားကိုရွေးချယ်ပါ။ မိုက်ကရိုဆော့ဖ်အတွင်းပိုင်းဘလော့ဂ်ကရှင်းပြသည်
ကျွန်ုပ်တို့သည် Windows ကိုပိုမိုလွယ်ကူစေရန် cursor အရွယ်အစားနှင့်အရောင်သစ်များကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။ Ease of Access Settings သို့သွားပါ။ Windows + U ) အောက်မှာ ရူပါရုံ “ အမျိုးအစား၊ ရွေးချယ်ပါ” cursor & pointer ရွေးချယ်စရာများစာရင်းကိုကြည့်ရှုရန်။ ကျနော်တို့နေဆဲအချို့ cursor ကိုအရွယ်အစား DPI ရဲ့ 100% ထက်ပို။ အပေါ်မှန်ကန်စွာအလုပ်မလုပ်စေခြင်းငှါအဘယ်မှာရှိစုံတွဲတစ်တွဲကိစ္စများပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်နေကြသည်။
မှတ်ချက်များကို Notepad မှတိုက်ရိုက်ပို့ပေးပါ
ခေါင်းစဉ်ဘားတွင်ကြယ်ပွင့်ကိုပြခြင်းဖြင့်မသိမ်းဆည်းရသေးသောအပြောင်းအလဲများရှိပါကမှတ်စုစာအုပ်သည်ယခုသင့်အားသတိပေးပါလိမ့်မည်။ UTF-8 ထဲရှိဖိုင်များကို Byte Order Mark မပါဘဲသိမ်းဆည်းရန်ရွေးစရာလည်းရှိသည်။ Insiders သည်မှတ်စုများကို Notepad မှတိုက်ရိုက်ပို့နိုင်သည်။
Ctrl + Shift + N သည် Notepad ၀ င်းဒိုးအသစ်တစ်ခုကိုဖွင့်လိမ့်မည်။
Ctrl + Shift + S သည် Save as … dialog ကိုဖွင့်လိမ့်မည်။
Ctrl + W သည်လက်ရှိ Notepad ၀ င်းဒိုးကိုပိတ်လိမ့်မည်။
ယခု Notepad သည်စာလုံးရေ ၂၆၀ ထက်မကသော MAX_PATH ဟုလူသိများသောဖိုင်ဖြင့်ဖွင့်ပြီးဖိုင်များကိုသိမ်းနိုင်သည်။
အလွန်ရှည်လျားသောလိုင်းများနှင့်အတူစာရွက်စာတမ်းများများအတွက် Notepad လိုင်းများကိုမမှန်ကန်ကြောင်းရေတွက်မယ်လို့ဘယ်မှာ bug ကို Fixed ။
File Open dialog ၌ OneDrive မှ placeholder ဖိုင်တစ်ခုကိုရွေးချယ်သောအခါ Windows သည်၎င်းဖိုင်၏ encoding ကိုဆုံးဖြတ်ရန်ထိုဖိုင်ကို download လုပ်လိမ့်မည်။
တည်ရှိမှုမရှိသောဖိုင်လမ်းကြောင်းနှင့်အတူဖွင့်သောအခါ Notepad ဖိုင်အသစ်ကိုဖန်တီးတော့မည်မဟုတ်သည့်မကြာသေးမီကဆုတ်ယုတ်မှုကိုပြုပြင်ခဲ့သည်။
Update လုပ်ထားသော Windows 10 Setup အတွေ့အကြုံ
မိုက်ခရိုဆော့ဖ်သည် Windows 10 setup အတွေ့အကြုံကိုအဆင့်မြှင့်တင်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည် ISO မှ setup.exe ကို run သောအခါသင်တွေ့ကြုံရသောအတွေ့အကြုံဖြစ်သည် - ယခုကြည့်ရှုမည် -
Narrator ကိုဖွင့်သောအခါသင့်ကို Narrator ၏ setting, features နှင့်လမ်းညွှန်များအားလုံးကိုကြည့်ရှုနိုင်သည့်မျက်နှာပြင်တစ်ခုပေးသော Narrator Home သို့သင်ပို့ဆောင်လိမ့်မည်။
installer လုပ်သားမြင့်မားသော disk အသုံးပြုမှုကို Windows module တွေ
Narrator ပြင်ဆင်မှုများနှင့်အသစ်များလည်းရှိသည်။ Feedback Hub ကိုဗားရှင်း ၁၈၁၁ သို့အဆင့်မြှင့်တင်ပြီးအမြင်အာရုံပြောင်းလဲမှုအချို့ပါရှိသည်။ Snip & Sketch အက်ပလီကေးရှင်းသည်ယနေ့တည်ဆောက်မှုတွင်ပြုပြင်မှုများများစွာရရှိသည်။ Windows 10 Build 18298 တွင် Microsoft blog တွင်ပြင်ဆင်ခြင်းများ၊ အသစ်ပြောင်းခြင်းများနှင့်သိရှိထားသောပြissuesနာများစာရင်းအပြည့်အစုံကိုသင်ဖတ်ရှုနိုင်သည် ဒီမှာ ။
Fix Microsoft store သည် ၀ င်းဒိုး ၁၀ တွင်အမှားနံပါတ် 0x80070422 ကိုဖွင့်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ
Microsoft စတိုးသည် 0x80070422 အမှားကုဒ်ဖွင့်ပြီးဖွင့်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါသို့မဟုတ်လတ်တလော windows များ 10 Upgrade လုပ်ပြီးနောက်? အက်ပလီကေးရှင်းပြeshနာဖြေရှင်းသူကိုဖွင့်ပါ၊
Windows 10 ဗားရှင်း 1809 တွင် 100% Disk Usage ကိုဘယ်လိုပြုပြင်မလဲ
Microsoft Windows မှလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုသို့မဟုတ်အက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုကစနစ်ကို hard drive ကို၎င်း၏အပြည့်အ ၀ အသုံးချရန်တွန်းအားပေးသောအခါ Windows 10 တွင် Disk အသုံးပြုမှုကိုဖြစ်စေသည်။ ၎င်းသည် Hard Drive အမှားဖြစ်နိုင်သည်၊ အဆင့်မြှင့်တင်စဉ်အတွင်းစနစ်ဖိုင်များပျက်စီးခြင်းသို့မဟုတ်အခြား ၀ င်းဒိုးအင်္ဂါရပ်များကျဆင်းနေခြင်း Windows 10 တွင်မြင့်မားသော Disk Usage ကို အသုံးပြု၍ လည်ပတ်စေသည်။
Windows 10 တွင် APC_INDEX_MISMATCH Stop code 0x00000001 ကို fix
ကိရိယာဒရိုင်ဘာတွင်အပြာရောင်အမှား 0x100000ea တွင်ကပ်ထားသောချည်များကို fix
Windows 10 update (KB4345421) ဖိုင်စနစ်အမှားများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည် (-2147219196)
ဒေါင်းလုပ်ရယူနိုင်သော Windows 10 1809 တဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာသော Update ကို KB4476976 (Build 17763.292)!
ဖြေရှင်းချက်။ ။ Windows 10, 8.1 and7မှ VPN Error 691
Windows 10 build 17758 သည် bug fix များကို Settings app, Narrator နှင့်အနီးအနားရှိမျှဝေမှုများသို့ယူဆောင်လာသည်
ဖြေရှင်းချက်။ ။ ပြတင်းပေါက် ၁၀ လိုင်စင်သက်တမ်းကုန်သွားပါပြီ
Windows 10 တွင် USB Device မှသတိမပြုမိသောအမှားများကိုဘယ်လိုပြုပြင်မလဲ
Windows 10 20H2, အောက်တိုဘာ ၂၀၂၀ ခေါ် update ကိုလူတိုင်းအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်။ ဤတွင်ယခုမည်သို့ရယူရမည်
Windows 10 မှာအသံ (သို့) အသံပြproblemsနာတွေကိုဖြေရှင်းနည်း
windows 10 update သည် 1903 ကို install လုပ်ရန်ပျက်ကွက်သည်
iTunes iphone windows 10 ကိုအသိအမှတ်မပြုပါ
windows 10 start menu troubleshooter ကို download လုပ်ပြီး Microsoft
0xc00000f windows 10 ကိုစတင်ရန်ပျက်ကွက်သည်
chrome windows7မှာအသံမရှိပါဘူး